အသက်​တစ်​ချာင်းခြင်း တူ​သော်​လည်း တန်​ဖိုးထားခြင်း မတူ​သောနိုင်​ငံ… – MEDIALANN
အသက်​တစ်​ချာင်းခြင်း တူ​သော်​လည်း တန်​ဖိုးထားခြင်း မတူ​သောနိုင်​ငံ…
လူ​ပျောက်​တာကို….သွားတိုင်​ထားတာကို….ရဲ​တွေက….လင်​​နောက်​လိုက်​သွားတာ​နေမှာတဲ့…..စကားကို ပြီးစလွယ်​​ပြောပြီး လူတစ်​ဖက်​သား ဂုဏ်​သိက္ခာ ထိပါး​နေလည်း ဂရုမစိုက်​ မသိဘူး တိုင်​ချင်​သလိုတိုင်​ကြ ငါတို့က ထင်​သလို ပါးစပ်​က ​ပြောကြမယ်​။
အားကိုးလို့ကို လုံးဝမရတဲ့ ကူညီပါရ​စေ….အဖွဲ့…
လူ​ပျောက်​တိုင်​ထားကို…၅ရက်​ ၆ရက်​…ကြာ​နေပြီဖြစ်​​သော်​လည်း ရဲ​တွေက. ရဲအလုပ်​​တောင်​မလုပ်​။ ပြည်​သူကို ကူညီမယ်​ဆိုတဲ့ အဖွဲ့က….လူတစ်​​ယောက်​​ပျောက်​တာကို စိုးရိမ်​လို့ အကူအညီလိုလို့ ရဲ​တွေကိုလာတိုင်​တာကို ပြန်​​ပြောတဲ့ ပုံစံက….
အခု​ခေတ်​က အဲသလိုပဲ Facebook မှာ….စာပို့ ဘာပို့ညာပို့နဲ့ လင်​​နောက်​လိုက်​သွားကြတာပဲ​နေမှာ….
စိတ်​မပူပါနဲ့ မကြာခင်​ သူဆက်​သွယ်​လာမှာပါ။
အ​လောင်း​တွေ့တာက ကူညီပါရ​စေ အဖွဲ့ရဲ့ အစွမ်းအစ​ကြောင့်​မဟုတ်​…
မိုးရွာတာနဲ့ အ​လောင်းက ​မြောင်းက​နေ ​မျောလာ…
​စေတနာ့ဝန်​ထမ်း အဖွဲ့အစည်းတစ်​ခုက စပြီးသိလို့ ​နောက်​မှ ဟိုဆရာ​တွေ သိရတာ…။
လူ​တော့ ​သေသွားပြီ….အမှုမှန်​က ​ပေါ်လာဦးမလား ဆရာ​တွေရယ်​။
ကူညီပါရ​စေ.ကိုလည်း အားကိုးလို့ ရပါ့မလား။
မွန်​တပ်​မ​တော်​ကိုလည်း အားကိုးလို့ ရပါ့မလား။
မြန်​မာပြည်​က လူ​တွေ မိမိအသက်​မှာ ဥာဏ်​နဲ့ ​စောင့်​ထိန်းကြပါခင်​ဗျာ ပြည်​သူ​တွေဘဝ မလုံခြုံ​ဆော့ဘူး။
မိဘ​တွေ ဘယ်​​လောက်​​တောင်​ ပူ​ဆွေး​နေမလဲ….
မြန်​မာပြည်​မှာ လာမဖြစ်​ပါနဲ့​တော့ အမ
လူပြောကျတာကို….သှားတိုငျထားတာကို….ရဲတှကေ….လငျနောကျလိုကျသှားတာနမှောတဲ့…..စကားကို ပွီးစလှယျပွောပွီး လူတဈဖကျသား ဂုဏျသိက်ခာ ထိပါးနလေညျး ဂရုမစိုကျ မသိဘူး တိုငျခငျြသလိုတိုငျကွ ငါတို့က ထငျသလို ပါးစပျက ပွောကွမယျ။
အားကိုးလို့ကို လုံးဝမရတဲ့ ကူညီပါရစေ….အဖှဲ့…
လူပြောကျတိုငျထားကို…၅ရကျ ၆ရကျ…ကွာနပွေီဖွဈသျောလညျး ရဲတှကေ. ရဲအလုပျတောငျမလုပျ။ ပွညျသူကို ကူညီမယျဆိုတဲ့ အဖှဲ့က….လူတဈယောကျပြောကျတာကို စိုးရိမျလို့ အကူအညီလိုလို့ ရဲတှကေိုလာတိုငျတာကို ပွနျပွောတဲ့ ပုံစံက….
အခုခတျေက အဲသလိုပဲ Facebook မှာ….စာပို့ ဘာပို့ညာပို့နဲ့ လငျနောကျလိုကျသှားကွတာပဲနမှော….
စိတျမပူပါနဲ့ မကွာခငျ သူဆကျသှယျလာမှာပါ။
အလောငျးတှတေ့ာက ကူညီပါရစေ အဖှဲ့ရဲ့ အစှမျးအစကွောငျ့မဟုတျ…
မိုးရှာတာနဲ့ အလောငျးက မွောငျးကနေ မြောလာ…
စတေနာ့ဝနျထမျး အဖှဲ့အစညျးတဈခုက စပွီးသိလို့ နောကျမှ ဟိုဆရာတှေ သိရတာ…။
လူတော့ သသှေားပွီ….အမှုမှနျက ပျေါလာဦးမလား ဆရာတှရေယျ။
ကူညီပါရစေ.ကိုလညျး အားကိုးလို့ ရပါ့မလား။
မှနျတပျမတျောကိုလညျး အားကိုးလို့ ရပါ့မလား။
မွနျမာပွညျက လူတှေ မိမိအသကျမှာ ဉာဏျနဲ့ စောငျ့ထိနျးကွပါခငျဗြာ ပွညျသူတှဘေဝ မလုံခွုံဆော့ဘူး။
မိဘတှေ ဘယျလောကျတောငျ ပူဆှေးနမေလဲ….
မွနျမာပွညျမှာ လာမဖွဈပါနဲ့တော့ အမ